Robbie Williams anodya zvinofadza, asingasimuki panguva imwe chete!
Muimbi Robbie Williams akataura nezvechokwadi chinotyisa pamusoro pake. Zvinotarisa kuti kubvira munguva pfupi yapfuura akatanga kutambura kubva pane zvisingafadzi zvikuru uye panguva imwechete yakazara noutano hwepfungwa. Haasi muimbi chete anotenderera kunze kweimba muhope usiku, iye anotambudzawo kicheni. Uyu mufananidzo wemakore makumi matatu nemakore anonyanya kufarira kune marudzi ose emasipi, ayo akachengetwa mumakisi uye firiji.
Hezvino kuti zvinoitika sei:
"Gore rose ndinodya usiku, asi kwete nenzira imwecheteyo nevamwe. Handimuke panguva imwe chete. Mangwanani anotevera handiyeuki chinhu, asi chinhu chakaipisisa ndechokuti nguva dzose ndinosarudza ndiro yakakwirira-koriori - keke, zvingwa, chokoti. Zvingava zvakanaka kana pfungwa dzangu dzisinganzwisisiki dzaida miriwo nemichero, asi kwete! Mupe masipi, mune zvakawanda. Ndakacherechedza chirwere changu chekudya uye masikati ndinoedza kuderedza kudya kune mapuroteni uye zvinomera zvekudya zvinonaka, kwandiri zvinonakidza, ini ndinogara ndiri mupfungwa yakaora mwoyo. "
Zvinetso nehope - kuneta kusingaperi
Kunyange zvazvo zvisingazivikanwe kana Robbie akakumbira rubatsiro kune vanyori, asi zvinonzwisisika chete chinhu chimwe chete, chirwere ichi chehope chinokanganisa zvakaipa pamararamiro ake ehupenyu. Nokuda kwekuti muimbi ane pakati peusiku pamakumbo ake, achidya zvokudya, anonzwa akaneta mangwanani!
Mudzimai Robbie Williams akamupa purazi yemarijuana
20 nyeredzi, avo kare - varwere vekliniki yepfungwa
Robbie Williams akabvuma kuti akapisa makore makumi maviri akapfuura uye ... anoenderera mberi kupisa
Pakupedzisira, inoenda kumukadzi wake anodiwa. Aida anoedza kumutsa vakatendeka mangwanani, uye panzvimbo yekumwemwerera anowana chikamu chezvakaipa. Ndezvipi zvingaita mudzimai nemadzimai evana vaviri venyeredzi yeBritish? Fungidzira kuti zvakaoma.
Cindy Crawford pamusoro pezera rake: "Handiedzi kuve zvakare zvakare. Ibenzi uye haina hanya. "
Emma Stone akatsanangura nguva yakareba sei asingagoni kusarudza pseudonym
Frenzied actress Chrissie Mets akakurudzira vatevedzeri pamwe nekuonekwa pamapeji eHarper's Bazaar
Robert Pattinson akayeuka nguva yake yakaipisisa
Vivienne Westwood ndeyevabonde here? Kunyange zvakadaro, aive achida naKat Moss ...
Eva Longoria akareurura kuda kwake kwenyaya dzepfeko yake
Krissi Teygen vakataura nezvekurwisana nekudhakwa kwewaini: "Ndainwa zvakawanda"
Jennifer Aniston aneta nokunyengedzera kwekuzvimba uye kuda kumisa pfungwa panyaya iyi
Jennifer Lawrence akataura nezvehukama hwekudya uye zvisikwa zvemashure mu "Red Sparrow"
Kylie Jenner akapa hurukuro yakajeka kune yeThe Complex
Mutevedzeri Emma Watson akaudza nezve rudo pamusoro pe "Harry Potter"
Ellen Degeneres akachera akavanza ndokutsvaga nevana vaJennifer Lopez mumhepo yehurukuro yehurukuro!
Tsika dzemhuri ye Kunis-Kutcher paKrisimasi yakashamisa kushamisa kwepasi rose!
Nzira yekunyengetera sei?
Burmilla - zvikamu zvehutano uye kutarisira kati
Kuputira mumwana mugungwa
Imitambo yeDionysus muAtene
Subcutaneous mite in dog - zviratidzo uye kurapa
Fur hat ne nzeve
Zvigadzirwa kubva pamadutu matatu
Bella Hadid pamutambo weCannes Film akadzokorora zvakare "gore" rakapera gore rapera
Gorosi mhete dzinonzwa - kushanda
Paul McCartney nemudzimai wake vakazvirumbidza chimiro chakanakisisa pamhenderekedzo yeSt. Barth
Kupfuura kushambidza firiji mukati?
Mushroom soup - koriori zvinyorwa
Mifananidzo isina kufanana yemuviri wakabereka uyo akabudisa Indaneti
Kuwedzera kwechirungu kweminwe 1
Zvishandiso zvinobatsira uye zvinokuvadza